Abaalmarinta Caddaaladda - Sheekooyinka Guusha - Edgar Navarro
Bishii Feebaraayo 2003, Thomas Howes, Keith Stansell iyo Marc Gonsalves, markii ay dayuuraddooda ku burburtay duurka dalka Colombia waxaa afduubay kooxda FARC. Iyadoo ay ka tirsanayd shirqoolka dadka lagu afduubo, kooxda FARC iyo kooxaha la shaqeeya waxay dileen laba qof oo ka tirsanaa rakaabka dayuuradda, Thomas Janis oo muwaadin Mareykan ahaa iyo Saajin Luis Alcides Cruz oo u dhashay dalka Colombia.
19-kii Oktoobar, 2003, Edgar Gustavo Navarro (magaciisu qarsoodiga ah, El Mocho), Taliyaha Kooxda Dhaqdhaqaaqa Teofilo Forero ee ka tirsan Ciidanka Hubeysan ee Kacaanka Colombia (Revolutionary Armed Forces of Colombia – FARC), ayaa ku dhintay rasaas ay isdhaafsadeen Ciidanka Colombia. Dilka Navarro waxaa suurageliyay seddex qof oo warbixin soo gudbisay, kuwaasoo ay dhiirigelisay abaalmarinta, ciidanka dalka Colombia ayaa tagay xerada TFMC halkaasoo iska hor imaadka uu ka dhacay. Abriil 2004, waxaa la siiyay qof kasta oo macluumaada soo gudbiyey $300,000 maadaama ay soo gudbiyeen warbixintii keentay in la dilo Edgar Navarro. Waxaa Navarro looga shaki qabay in uu ku lug lahaa afduubkii seddexdii Mareykanka ahaa ee kor lagu soo sheegay.
Tan iyo 1997-kii, Wasaaradda Arrimaha Dibedda Mareykanka waxay FARC u aqoonsadeen in ay ka tirsan yihiin Urur Argagixiso Caalami ah. Waxay FARC doonayaan in mucaaradnimadooda ay ku saleysnaato awood, rabshado iyo falal dembiyo ay kaga soo horjeestaan dalalka, dawladaha iyo shakhsiyaadka aan aragtidooda raacsaneyn. Tan iyo horraantii 1960-dii, FARC rabshado lid ku ah Mareykanka ayeey ku kici jireen waxayn ka shaqeyn jireen waxyaabo lid ku ah danaha Mareykanka, waxayna sheegeen bishii Maarso 1998-kii in dhammaan saraakiisha Mareykanka ay yihiin bartilmaameed militari oo xaq ah. Iyadoo ay dheer tahay koontarabaanka mukhaadaraadka, waxay FARC adeegsadaan awood ku dhisan baad, afduub iyo dil loo geysto muwaadiniinta Mareykanka ee ka shaqeeya, booqda ama ganacsi ku leh dalka Colombia iyo dalalka la jaarka ah.